महिनावारी,बाट थाहा पाउन सक्छिन्, बाँझोपना छ कि छैन ? – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २६, २०७८ समय: १५:३७:४०
बाझोपन ! यो शब्दले संभवत सबै,भन्दा बढी महिला,लाई झस्काउने गर्छ । किनभने हरेक महिला प्रसव-पीडाको अनुभव लिन चाहन्छन् । सन्तान-सुखको अपेक्षा राख्छन् । आफ्नै कोख,बाट जन्मिएको बच्चालाई काखमा खेलाउने आकंक्षा राख्छन् ।यस्तो अवस्थामा जब आफु सन्तान जन्माउन असक्षम छु भन्ने वोध हुन्छ, त्यो कुरा कुनैपनि महिलाले सहजै पचाउन सक्दैन ।तर, पचाउनैपर्ने वाध्यता आइलाग्छ कहिले काहीँ । किनभने कति महिलामा बाँझोपनको समस्या हुन्छ । किन बाँझोपन हुन्छ ? यसमा एउटा मात्र जवाफले पुग्दैन । कारण अनेक हुनसक्छ । यद्यपी आफुमा बाँझोपन भए, न’भएको संकेत भने उनीहरुले मासिक स्रावकै क्रममा थाहा पाउन सक्छन् ।यसका लागि महिलाहरुले महिनावारीका क्रममा हुने मासिक चक्रबारे ध्यान दिन जरुरी छ ।
गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोगले बाझोपनाको समस्या निम्तने मानिसको आम धारणा छ । जबकी गर्भनिरोधक चक्कीको सेवनले गर्भधारणा गर्नमा कुनै समस्या हुँदैन । बरु यसको लगातारको प्रयोगले गर्भधारण गर्नमा सहयोग पुग्ने गर्छ ।एक शोधले जनाए अनुसार चार वर्ष भन्दा कम समय गर्भनिरोधक चक्की सेवन गर्ने महिलामा दुई वर्ष भन्दा कम समय यो चक्की सेवन गर्ने महिलाको तुलनामा गर्भवती हुने सम्भावना धेरै रहेको थियो ।